Tapitra ny fiandrasana, tonga tany Espana ihany i Amazon Pay | Vaovao momba ny gadget
Nifarana ny fiandrasana, tonga tany Espana ihany i Amazon Pay
Betsaka ny tsaho sy ny eritreritra momba ny daty mety nofidian'ny mpitarika Amazon ho azy ireo rafitra fandoavam-bola an-tserasera tonga tany Espana. Azontsika atao ihany ny manambara izany anio April 18 Ity no andro voafidy mba hisolo tena ny Paypal fanta-daza hahatongavany eto amin'ny firenentsika.
Raha amin'izao fotoana izao dia tsy tena fantatrao hoe inona izany Amazon Pay Lazao aminao fa tsy inona izany fa ny sehatra iray izay mikasa ny ho mpanelanelana rehefa mandoa vola amin'ny tranokala, izany hoe amin'ny maha mpampiasa anao dia tsy mila misoratra anarana amin'ity sehatra ity fotsiny ianao miaraka amin'ny angona momba anao sy ny banky. Raha vantany vao notanterahina ity dingana ity dia afaka mandoa vola amin'ny fampiasana an'ity kaonty ity ianao amin'ny karazana fivarotana an-tserasera rehetra ahafahan'ny serivisy ampiasaina.
Amazon Pay, sehatra vaovao handoavana vola amin'ny Internet.
Ho tsipiriany iray dia lazao aminao fa ny iray amin'ireo tombony lehibe amin'ity serivisy ity dia, raha efa manana kaonty Amazon mavitrika ianao dia mila miditra amin'ny tranokala Amazon Pay fotsiny ianao ary mandeha ho azy ny orinasa dia hamela ny serivisy. Miaraka amin'ity hetsika tsotra ity, ity sehatra fandoavam-bola an-tserasera vaovao ity dia hampifandray ireo kaonty roa amin'ny fametrahana ny antontan-taratasinao sy ny mombamomba anao momba ny fandefasana sy ny fandoavam-bola ao amin'ny rafitr'izy ireo ka tsy mila miditra amin'izy ireo ianao isaky ny mividy.
Araka ny hitanao, amin'ity farany ity dia eo indrindra no ahitantsika ny fahasamihafana lehibe amin'ny Paypal satria ny Amazon Pay dia manakana anao tsy hisoratra anarana amin'ny magazay an-tserasera amin'ny alàlan'ny fanomezana ny angon-drakitrao rehetra, toy ny fifaninanana, fa rehefa vita ny fividianana. ary asehoy fa te handoa vola amin'ny serivisy Amazon ianao, ity omeo ny angona rehetra ilaina amin'ny faktiora ary alefa any amin'ny magazay tsy mila fisoratana anarana vaovao sy maro hafa.
Raha amin'ny maha mpivarotra anao dia mahaliana anao ny mampiditra ny Amazon Pay amin'ny magazay na sehatra misy anao an-tserasera dia lazao aminao fa androany dia efa misy fampianarana video marobe momba ny fomba anaovana izany amin'ny fantson'ny YouTube ny sehatra mihitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Nifarana ny fiandrasana, tonga tany Espana ihany i Amazon Pay
Nintendo dia manamafy fa tsy hanao NES Mini Editions intsony
LG dia manala ny tratrany amin'ny famaritana ny LG G6 miaraka amina fanambaràna mahafinaritra